Ukuhlanganiswa kabusha kwezikweletu: kuyini futhi ngingakuthola kanjani? Ezezimali Zomnotho
Ukuhlanganiswa kabusha kwezikweletu
Encarni Arcoya | | Ukuphela kwenyanga
Kunezikhathi lapho unezikweletu eziningi kakhulu okwenza ukuziphilisa kube nzima. Kufanele ube nekhanda elihle kakhulu ukukhumbula ukubakhokhela bonke. Kepha, kuthiwani uma sikutshela ukuthi ngokuhlanganiswa kwezikweletu ungazuza kakhulu?
Uma ungazi ukuthi yini yini ukuhlanganiswa kwezikweletu, izinzuzo ezibandakanya lokhu, noma izinyathelo okufanele uzithathe ukuze uzihlanganise zonke, lapha sizokunikeza yonke leyo datha.
1 Kuyini ukuhlanganiswa kwesikweletu
2 Izinzuzo nezinkinga zokuhlanganisa kabusha izikweletu
2.1 Izinzuzo zokuhlanganiswa kwesikweletu
3 Izinyathelo zokuhlanganiswa kwesikweletu
3.1 Thola izikweletu zakho
3.2 Kusale malini
3.3 Imalimboleko simulator
3.4 Iya ebhange lakho
4 Izindleko ozoba nazo kusukela ekuhlanganisweni kabusha kwezikweletu
Kuyini ukuhlanganiswa kwesikweletu
Uma uzwile ngokuhlanganiswa kabusha kwezikweletu, ungahle wazi ukuthi sikhuluma ngani. Igama ngokwalo selivele likhombisa okuncane komqondo walo. Sikhuluma ngakho hlanganisa zonke izindleko (imali mboleko, amakhredithi, njll.) kokukodwa, okwenza isitolimende sibe sincane kepha isikhathi okufanele ukhokhe ngaso isikweletu siyakhuphuka. Ngale ndlela, kutholakala ukuthi umndeni unethezeke ngokwengeziwe ngokukhokha inyanga nenyanga ngoba imali izobe iphansi.
Inkinga kuphela kulokhu ukuthi, ngokwenza isitolimende sibe sincane, isikhathi esisithathayo ukubuyisa leyo mali mboleko noma isikweletu siyakhuphuka. Ngamanye amagama, uzoba sezikweletini isikhathi eside, futhi lokho kunomphumela owodwa owodwa: inzalo kanye / noma amakhomishini. Lokho kusho ukuthi kuzofanele ukhokhe imali ethe xaxa futhi isikhathi eside, kepha kwesinye isikhathi lesi sibalo sezezimali ukuphela kwendlela ongaphila ngayo kangcono.
Futhi, iningi lokuhlanganiswa kabusha kwezikweletu lisebenzisa ikhaya, noma impahla ephethwe, njengesibambiso. Ngale ndlela, uma ungenalutho, kunzima kakhulu ukukuthola.
Izinzuzo nezinkinga zokuhlanganisa kabusha izikweletu
Manje njengoba wazi ukuhlanganiswa kwesikweletu kangcono kancane, ungakuthola kusalungela, kepha njengoba kunezinzuzo, kufanele ubheke nobubi.
Izinzuzo zokuhlanganiswa kwesikweletu
Uzokuthola lokho imali yenyanga iyancipha, kwesinye isikhathi kakhulu.
Ngokunciphisa imali ekhokhwa njalo ngenyanga, i- ukukhokhwa okugcwele kwemali mboleko kuzonwetshwa ngesikhathi, ngakho-ke kuzothatha isikhathi eside ukuyisusa.
Kunentshisekelo enkulu kanye namakhomishini lapho kukhushulwa eminyakeni engaphezulu yemalimboleko.
Unayo izindleko ezengeziwe ezengeziwe (okumele kucatshangwe cishe ekuqaleni).
Ungalahlekelwa yilokho okufake njengesibambiso.
Izinyathelo zokuhlanganiswa kwesikweletu
Manje njengoba konke sekucacile, ake siqale ngezinyathelo zokuhlanganiswa kwezikweletu. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulandele uchungechunge lwezinyathelo ezizokusiza ukuthi ungashiyi lutho endleleni, ikakhulukazi lapho ubhekene nezindleko ezingabandakanywa yile nqubo (yebo, inezindleko ezithile).
Thola izikweletu zakho
Kuyisinyathelo sokuqala okufanele usithathe, ifayela le- wazi ukuthi yiziphi izimali mboleko, izikweletu nezikweletu onazo njengamanje. Ngamanye amagama, sikhuluma ngokwazi ukuthi ukhokha ini kahle ngenyanga ngokuya ngalezo zikweletu onazo, kungaba yisibambiso, isikweletu semalimboleko, ukukhokhwa kwemali mboleko ... Ngisho nemoto noma izikweletu ne-Administration.
Udinga ukwazi imali ngqo oyikhokhayo kulezo zindaba.
Uma usuthole izindleko, sincoma lokho yenza okufanayo nangeholo lakho, bese ubona ukuthi isibalo esiphumayo sihle noma asibi. Uma kukubi, izinto zihamba kabi ngoba uzongena esikweletini ngaphezu kwalokho osunakho, futhi ngokuhamba kwesikhathi, lokho ngeke kusabekezeleleka.
Futhi ngokuya ngesibalo esihle, uzokwazi ukwazi ukuthi unekhwalithi eyanele yempilo noma cha.
Manje kuza ingxenye lapho ungeke ucabange ngesixazululo sokuqala bese usifeza. Okungukuthi, udinga ukubala inketho engakusiza kakhulu. Futhi ukuthi ukuhlanganiswa kabusha kwezikweletu kudala izindleko ezingeziwe (ukuthi izikhathi eziningi azinakwa) njengokukhansela imali mboleko yangaphambilini, ukuvula entsha, amakhomishini ... Yingakho kubalulekile ukuthi ukubheke.
Futhi kwenziwa kanjani? Ngabalingisi bemalimboleko. Ngale ndlela, futhi uzibona ezinhlakeni ezahlukahlukene, ungathatha isinqumo esifanele.
Iya ebhange lakho
Kulokhu, kufanele uchaze isimo ozithola ukuso, nokuthi yonke into ingaxazululwa kanjani (khumbula ukuthi uma uhamba nesixazululo esingaba khona, noma ngabe akusona leso abasifunayo, uzobe wenza ingxenye yakho ngoba awenqabi ngezinkokhelo, kodwa ukukwenza ngenye indlela engakuminzisi).
Bazokwenza ube isipho esiphikisayo, Mhlawumbe bazophakamisa isixazululo ngezidingo nemibandela yabo, engahle ikusebenzise noma ingahle ingakusebenzisi.
Kuthiwani uma kungakusebenzeli? Lokho kuzofanele uzame kwamanye amabhange. Kepha kuhlala kungcono ukuqala ngalowo osaziyo ngoba kuzoba lula ngabo ukusisiza (kunokulahlekelwa yikhasimende).
Ezimweni eziningi, abazokwenza ukukunikeza imalimboleko yempahla ebanjiswayo, ngoba imvamisa kuyisibalo wonke amabhange ayisebenzisayo ekuhlanganiseni izikweletu. Inkinga ukuthi uma ungenalo ikhaya, noma isiqinisekiso, izinto zizoba nzima kakhulu. Akunakwenzeka, kepha kuzobiza kakhulu futhi kube nenqubo eyinkimbinkimbi ukuthobela.
Izindleko ozoba nazo kusukela ekuhlanganisweni kabusha kwezikweletu
Ukuhlanganiswa kabusha kwezikweletu kungaba yisixazululo esikahle uma unezinkokhelo eziningi kakhulu futhi ungeke wakwazi ukuzisingatha zonke. Noma kunjalo, akuyona mahhala. Eqinisweni, kuzokubiza nge-spike. Futhi kunezindleko ezintathu ezingenakwenzeka ukugwema:
Izindleko zokukhanselwa kwemali mboleko. Ngoba uma unamalimboleko noma amakhredithi, kuzofanele uwakhansele, futhi sesivele sazi ukuthi lokho kusho ukukhokha ukukwenza ngaphambi kwesikhathi.
Amakhomishini. Uma kwenzeka usebenzisa i-ejensi yokulamula. Kepha uma ungayisebenzisi, amabhange nawo angakukhokhisa amakhomishini.
Izindleko ezithathwe ekubanjweni kwemali mboleko noma esifundweni sokuthi kungenzeka yini. Njengoba sishilo, ukuhlanganiswa okuningi kwezikweletu kukhokhiswa intela ekhaya noma esakhiweni, futhi-ke, konke lokhu kufanele kubalwe futhi kugcwaliswe kumadokhumende (i-notary, i-Tax on Documented Legal Act, njll.) ukuthi kuzofanele ukhokhe.
Izintshisekelo. Izintshisekelo, noma ngabe zinomuzi phakathi noma ngaphandle kwayo, zizoba phezulu, ikakhulukazi ngoba isikhathi sesikweletu sinde.
Zonke lezi zindleko zaziwa njengezindleko zokuhlanganisa, futhi bangamela phakathi kwe-3 ne-5% yenani elibiza ukusebenza.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Ukuhlanganiswa kabusha kwezikweletu